कम्पनीको शेयरबाट लाभ
वास्तविक समय मा 71229 कम्पनीहरु को स्टक उद्धरण।
स्टक बजार, स्टक एक्सचेंजहरू आज
स्टक अनलाइन उद्धरण गर्दछ
स्टक उद्धरण इतिहास
स्टक बजार पूंजीकरण
कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन शेयर। कहाँ पैसा लगानी गर्ने?
शेयर र प्रतिशतको मुनाफा प्रति प्रति आयमा परिवर्तन संसारभरका सबै कम्पनीहरूको पछिल्लो वर्षको तुलनामा।
विजेट स्टक उद्धरण अनलाइन चार्टहरू लागत इतिहास पूंजीकरण लाभांश लाभ आय मूल्याङ्कनहरू
सारा संसारबाट संयुक्त राज्य अमेरिका NMS (NASDAQ) NYQ (NYSE)
स्टक एक्सचेंज मुद्रा USD - अमेरिकी डलर EUR - यूरो GBP - पाउन्ड स्टर्लिङ JPY - येन CNY - युआन RUB - रूसी रूबल AUD - Aussie डलर AZN - अजरबैजान मान ALL - अल्बानियन लेक DZD - अल्जेरियन दिनार XCD - पूर्वीक्यारिबेयनडलर AOA - क्वान्जा MOP - मकानीस पताका ARS - अर्जेन्टाइनपेसो AMD - आर्मीनियन AWG - Aruban Florin AFN - Afghan अफ्गानी BSD - Bahamian डलर BDT - बंगलादेश टाका BBD - बार्बाडोस डलर BHD - बाहरेन दिनार BYR - बेलारुसियनरुबल BYN - बेलारुसियनरुबल BZD - बेलीज डलर XOF - CFC फ्रैंक BMD - बर्मुडा डलर BGN - बुल्गेरियनलेभ BOB - बोलिवियाई BAM - बोस्निया र हर्जगोभिना परिवर्तनीय मार्क BWP - बोट्सवाना पुला BRL - ब्राजिलियन वास्तविक BND - ब्रुनाई डलर SGD - सिंगापुर डलर BIF - बुरुन्डीफ्रेङ्क BTN - भूटान Ngultrum INR - भारतीय रुपैयाँ VUV - Vanuatu Vatu HUF - हंगेरियन फरिंट VEF - भेनेजुएला बोलिभर फूएर्टे VND - Vietnamesse दांग XAF - CFC फ्रैंक HTG - Haitian Gourde GYD - गुयाना डलर GMD - गाम्बियन डलसी GHS - घाना Cedi GTQ - ग्वाटमालन कुएतजल GNF - गिनी फ्रैंक - - गुएर्नेसी पाउन्ड GIP - जिब्राल्टर पाउन्ड HKD - हङकङ डलर HNL - Honduran Lempira GEL - जोर्जियान लारी DKK - डेनिस मुकुट DJF - डिजिबुटीफ्रेङ्क DOP - डोमिनिकन पेसो EGP - इजिप्सियन पाउन्ड ZMW - जाम्बियन क्वाचा MAD - मोरक्कन दिर्हाम ZWD - जिम्बाबियन डलर ILS - Israeli नयाँ शेकेल IDR - इन्डोनेसियाली रुपैयाँ JOD - जोर्डन दिनार IQD - इराकी दिनार IRR - इरानी रियाल ISK - आइसल्याण्ड क्रोन YER - येमेनी रियाल CVE - केपभर्देएस्क्युडो KZT - Kazakhstani tenge KYD - घडियाल द्वीप डलर KHR - कम्बोडियन Riel CAD - अमेरिकी डलर QAR - Qatari रियाल KES - केन्या शिलिंग COP - कोलंबियेन पेसो KMF - Comoran फ्रैंक CDF - कांगोलिज फ्रैंक KPW - उत्तर कोरिया वन KRW - दक्षिण कोरियाली वन RSD - सर्बियन दिनार CRC - कोस्टा रिका पेट CUP - क्युबा पेसो KWD - कुवैती दिनार NZD - न्यूजील्याण्ड डलर KGS - Kyrgyzstani सोम LAK - ळओ LVL - लातवियाई अक्षां LSL - Loti ZAR - रेण्ड LRD - लाइबेरिया डलर LBP - लेबनानी पाउन्ड LYD - लीबिया दिनार LTL - लिथुआनियाई लितास CHF - स्विस फ्रैंक MUR - Mauritius रुपैयाँ MRO - मारिटेनियन औगुइया MGA - मालागासी Ariary MKD - म्यासेडोनियन देनर MWK - मलावी Kwacha MYR - Malaysin रींगगिट MVR - माल्दिभियन रूफिया MXN - मेक्सिकन पेसो MZN - मोजाम्बिकन मेटिकल MDL - Moldovan लियू MNT - मङ्गोलियन टुग्रिक MMK - बर्मेली क्याट NAD - नेमिबियन डलर NPR - नेपाली रुपैयाँ NGN - नाइजेरियाली Naira ANG - Antilliaanse gulden NIO - निकारागुआ कार्डोबा XPF - फ्रान्सेली प्रशान्त फ्रैंक NOK - नर्वे क्रोन AED - यूएई दिर्हाम OMR - ओमानी रियाल SHP - सेन्ट हेलेना पाउन्ड PKR - पाकिस्तानी रुपैयाँ PAB - पनामानियन बल्बोवा PGK - Kina PYG - Guarani PEN - पेरू न्येभोसोल PLN - सिंगापुर डलर RWF - रुआण्डा फ्रैंक RON - रोमानियन ल्यु XDR - एसडीआर (विशेष अधिकार चित्रकला) SVC - साल्भाडोरेली पेट WST - टाला STD - साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे Dobra SAR - साउदी रियाल SZL - Lilangeni TRY - नयाँ टर्की लीरा SCR - सेचिलिसरुपैयाँ SYP - सिरियाली पाउन्ड SKK - स्लोभाककोरुना SBD - सोलोमन द्वीप डलर SOS - सोमालीसिलिङ SDG - सुडानी पाउन्ड SRD - सूरीनामी डलर SLL - लियोन TJS - Tajikistani Somoni THB - थाई TWD - ताइवान नयाँ डलर TZS - तान्जनियनसिलिङ TOP - pa`anga TTD - ट्रिनिडाड र टोबागो डलर TND - Tunisian दिनार TMM - तुर्कमेनिस्तान मनात TMT - तुर्कमेनिस्तान नयाँ मनात UGX - युगान्डासिलिङ UZS - उज्वेकिस्तानसम UAH - रिव्निया UYU - उरुग्वे पेसो FJD - फिजी डलर PHP - फिलिपिन्समा पेसो FKP - फल्कल्यान्डद्वीपपाउन्ड HRK - क्रोएसियनकुना CZK - चेक कोरुना CLP - चिलीयन पेसो SEK - स्विस फ्रैंक LKR - श्रीलंका रुपैयाँ ERN - Nakfa ETB - इथियोपियाली Birr JMD - Jamaican डलर SSP - दक्षिण सुडानी पाउन्ड BTC - Bitcoin CLF - चिली Unidad डे Fomento EEK - इस्टोनियाली क्रून GGP - गुएर्नेसी पाउन्ड IMP - मानद्वीप पाउन्ड JEP - जर्सी पाउन्ड MTL - मालटिस् लिरा XAG - चाँदी 1 ट्रय औंस XAU - सुनको 1 ट्रय औंस (इलेक्ट्रनिक सुन / विद्युतीय सुन) ZMK - जाम्बियन क्वाचा ZWL - जिम्बाब्वे डलर ATS - अष्ट्रीया शिलिंग AON - अंगोला नयाँ क्वान्जा BEF - बेल्जियम फ्रैंक GRD - ग्रीक ड्राच्मा IEP - आइरिस पाउन्ड ESP - स्पेनिश पेसेटा ITL - इटालियन लिरे CYP - साइप्रस पाउन्ड DEM - Deutsche चिन्ह NLG - नेदरल्यान्ड्स गिल्डर PTE - पुर्तगाली Escudo SIT - स्लोभेनियाली टोलर SRG - सूरीनामी गिल्डर FIM - फिन चिन्ह FRF - फ्रान्स स्पष्ट ECU - ECU YUM - Yugoslavian नयाँ दिनार
अन्तिम रिपोर्ट मिति
प्रति शेयर आय ▼
कमाई प्रति शेयर कम्पनीको शेयरहरूको संख्याले शुद्ध आय (वा मुनाफा) विभाजित गरेर गणना गरिन्छ।
वर्षको लागि परिवर्तन गर्नुहोस् %
1. प्रति शेयर Toyota Motor Corporation आय
2. प्रति शेयर ORIX Corporation आय
3. प्रति शेयर KB Financial Group Inc. आय
4. प्रति शेयर Brookfield Property Partners L.P. आय
5. प्रति शेयर Shinhan Financial Group Co., Ltd. आय
6. प्रति शेयर Koninklijke Philips N.V. आय
7. प्रति शेयर Carnival plc आय
CUK 04/01/2020 0.64 $
8. प्रति शेयर Honda Motor Co., Ltd. आय
9. प्रति शेयर SK Telecom Co., Ltd. आय
10. प्रति शेयर Tata Motors Limited आय
11. प्रति शेयर Chunghwa Telecom Co., Ltd. आय
CHT 05/02/2020 0.35 $
12. प्रति शेयर Vedanta Limited आय
13. प्रति शेयर ING Groep N.V. आय
14. प्रति शेयर Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. आय
15. प्रति शेयर Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. आय
16. प्रति शेयर News Corporation आय
17. प्रति शेयर Nomura Holdings, Inc. आय
18. प्रति शेयर Mizuho Financial Group, Inc. आय
19. प्रति शेयर Banco Santander, S.A. आय
20. प्रति शेयर Urstadt Biddle Properties Inc. आय
UBP 01/01/2020 0.08 $
21. प्रति शेयर KT Corporation आय
22. प्रति शेयर NovaGold Resources Inc. आय
NG 05/02/2020 -0.03 $
23. प्रति शेयर ESSA Pharma Inc. आय
EPIX 02/01/2020 -0.07 $
स्टकबाट कमाई - यो कम्पनीको सफलताको मुख्य सूचक हो। सेयर खरीद गर्दा, लगानीकर्ता कम्पनी को विकास मा लगानी, र कम्पनी, एक नाफा, देखाउँछ कि कति शेयर प्रति सबै लाभ वितरण गरिएको छ।
हाम्रो सेवा "ग्लोबल स्टकबाट कमाई" allstockstoday.com यस्तो सुविधाहरु संकलन र गणना गर्दछ:
कम्पनीहरूको स्टकबाट अनलाइन
ग्लोबल स्टकको नाफा आज
प्रति कम्पनी आय मा परिवर्तन गर्नुहोस्
गत वर्षको तुलनामा कम्पनी शेयर लाभको गतिशीलता
नाफामा कम्पनी रिपोर्टको मिति। आजको लागि अन्तिम मिति।
कम्पनी शेयर प्रति लाभ को राशि
वर्षको लागि स्टक नाफामा परिवर्तन
अनलाइन स्टक मुनाफा
कम्पनीहरूको स्टकबाट कमाई अनलाइन - कम्पनीहरूको वित्तीय कथनबाट सार्वजनिक स्रोतबाट एक विशेषता।
कम्पनीको सेयरबाट भएको लाभ लेखा कागजातमा कम्पनीको देखाइएको नाफाको मूल्य हो। शेयर बजार मा कम्पनी शेयरको मूल्य मा परिवर्तन बाट नाफा संग कम्पनी शेयरहरु बाट लाभ भ्रमित नगर्नुहोस्।
कम्पनीको सेयरबाट कमाई रिपोर्टिंग अवधिको अवधिमा एक पटक प्रकाशित हुन्छन्, नियमको रूपमा, यो लेखा तिमाही हो। कम्पनीले संचालन गरेको देशको कानूनमा निर्भर गर्दै, कम्पनीहरूको नाफा देखाउने अवधिको अवधि फरक हुन सक्छ।
विश्व कम्पनीहरूको स्टकको नाफा आज हाम्रो साइटको सारांश सेवा हो जसमा तपाईले पछिल्ला लाभको मात्रा देख्न सक्नुहुनेछ (अन्तिम रिपोर्टिंग अवधिको लागि)।
प्रति शेयर आय - यो कम्पनीको नाफा को कुल रकम यस कम्पनीको सेयर संख्या बाट विभाजित छ।
यसैले, प्रति शेयर कम्पनीको नाफा को लागी लगानी को पैसा को लाभ को राशि को एक औसत सूचक हो।
प्रति शेयर आय आज एक वित्तीय अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरूको प्रदर्शन तुलना गर्न सजिलो सूचक हो।
प्रति शेयर कम्पनी आम्दानीमा परिवर्तनले अब प्रति शेयर कम्पनीको अनुपात देखाउँदछ कि कम्पनीले अब गत वर्षको तुलनामा।
प्रति शेयर कम्पनी आय परिवर्तन परिवर्तनको रूपमा प्रदर्शित छ। यदि प्रति शेयर आयमा परिवर्तन गत बर्ष भन्दा बढी छ, भने आंकडा हरियो मा प्रदर्शित हुनेछ। यदि आज प्रति सेयर आम्दानी १२ महिना अघि भन्दा कम छ भने, तब प्रतिशत रातोमा प्रदर्शित हुनेछ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा, कम्पनी शेयर लाभको गतिशीलता कम्पनीको सफलताको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो।
नाफाको गतिशीलता राम्रो कम्पनीको प्रदर्शनको मात्र सूचक होईन। केही कम्पनीहरूले पैसामा थोरै नाफा देखाउन सक्छन्, तर सेयरको खरीद वा पूंजीगत सामानहरू र विकासको माध्यमबाट पूँजीकरण बढाउँछन्।
प्रति शेयर कम्पनीको कमाईको गतिशीलताले कम्पनीको अन्य सम्पत्तिहरू बाहेक, वित्तीय कथनबाट केवल नगद आय देखाउँदछ।
यद्यपि नाफाको गतिशील बृद्धि वर्ष बर्षदेखि लगानीकर्तालाई स the्केत गर्दछ कि कम्पनी स्थिर रूपमा विकास भइरहेको छ र महँगो भइरहेको छ।
नाफामा कम्पनीको रिपोर्टको मिति, प्रतिवेदनको अन्तिम मिति सन्दर्भ मूल्य हो, मिति जसमा कम्पनीको नाफाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
आय कथन मिति सामान्यतया देशको व्यवस्थापकीय स्तरमा सेट हुन्छ जहाँ कम्पनीले काम गर्दछ। तर कम्पनी नै कानून द्वारा स्थापित सीमा भित्र अन्तिम लाभ रिपोर्टिंग को मिति परिवर्तन गर्न सक्दछ।
शेयर बजारका केहि सुविधाहरूको लागि, कहिलेकाँही मिति कम्पनीको नाफा कथनले कम्पनीको मनोवृत्तिलाई असर गर्न सक्छ।
तपाईं हाम्रो तालिका "शेयर लाभ" सेवा मा प्रत्येक कम्पनी को लागी लाभ रिपोर्ट को मिति देख्न सक्नुहुन्छ।
कम्पनी को प्रति शेयर लाभ को राशि
प्रत्येक ग्लोबल शेयर बजार कम्पनीको लागि प्रति कम्पनी सेयर आम्दानीको रकम स्टक रिटर्नको सारांश तालिकाको एक अलग स्तम्भमा प्रदर्शित हुन्छ।
लाभको रकम कम्पनीको कुल नाफाको रूपमा गणना गरिन्छ, सेयरको संख्याबाट विभाजित।
प्रति शेयर पूर्वनिर्धारित आय स्तम्भ सबैभन्दा ठूलो बाट सानोमा पूर्वनिर्धारित द्वारा क्रमबद्ध गरिएको छ। यसैले, तपाईं तुरून्तै शीर्ष प्रति शेयर कम्पनीहरूमा देख्नुहुनेछ।
बर्ष शेयर को लाभ मा परिवर्तन
बर्षको लागि शेयर लाभ मा परिवर्तन आज को लागी प्रति शेयर आय आय को लागी अनुपात अनुपात गत बर्ष को लागी शेयर।
वर्षको लागि प्रति सेयर आम्दानी परिवर्तन हाम्रो तालिकाको अन्तिम स्तम्भमा प्रदर्शित हुनेछ।
प्रति शेयर आयको सकारात्मक गतिशीलता हरियो प्रतिशतमा प्रदर्शित हुन्छ।
नकारात्मक आय प्रति शेयर, क्रमशः, रातो हुनेछ।
वर्षको लागि प्रति कम्पनी सेयर आम्दानीमा परिवर्तन भनेको कम्पनीको दीर्घ-अवधििय विशेषता हो। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि ठूला कम्पनीहरूले स्टक एक्सचेन्जमा उनीहरूको सेयरको कारोबार गर्छन्, नियमको रूपमा, उनीहरूको व्यवसायिक योजनाहरूमा नाफाको वार्षिक रिपोर्टिंगलाई ध्यानमा राख्छन्।